नाइजेरिया मा ट्रेडमार्क दर्ता लागि प्रक्रिया - नाइजेरिया मा व्यवस्था दृढ - Lawyers in Nigeria.
नाइजेरिया मा ट्रेडमार्क दर्ता प्रक्रिया
को लेक्स Artifex व्यवस्था कार्यालय आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण व्यवसाय सहयोग गर्न बौद्धिक संपदा हेल्पडेस्क शुरू भएको छ (आईपी) र आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार लागू (बौद्धिक संपदा) वा नाइजेरिया संग व्यापार गर्दा. यो प्रकाशन नाइजेरिया मा ट्रेडमार्क दर्ता लागि प्रक्रियाहरु जोड.
एक नाइजेरियाली ट्रेडमार्क के हो?
एक नाइजेरियाली ट्रेडमार्क उपकरण छ, ब्रान्ड, शीर्षक, लेबल, टिकट, नाम, हस्ताक्षर, शब्द, पत्र, अंक, वा त्यो तत्संबंधी कुनै पनि संयोजन कानुनी रूपमा पनि ट्रेडमार्क दर्ता गरिएको छ, पेटेंट र डिजाइन रजस्ट्री, व्यावसायिक व्यवस्था विभाग, उद्योग को संघीय मंत्रालय, व्यापार र लगानी, एक कम्पनी वा उत्पादन प्रतिनिधित्व र अरूको ती एक पक्ष वा कम्पनी बाट व्यापार को नै लाइन मा सामान स्रोत विशिष्ठ रूपमा.
नाइजेरिया एक ट्रेडमार्क दर्ता फाइदाहरू:
दर्ता विज एक विज माल वा माल कक्षाहरू त दर्ता प्रयोगकर्ता द्वारा नाइजेरिया मा ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न विशेष अधिकार confers.
ट्रेडमार्क भन्दा सम्पत्ति अधिकारको enforceability नाइजेरिया मा यस्तो ट्रेडमार्क को दर्ता मात्र निर्भर छ.
ट्रेडमार्क वित्तीय लाभ र वैश्विक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न लागि सम्पत्ति हो.
दर्ता यस्तो नाइजेरिया रूपमा उदीयमान बजार मा कम्पनीहरु द्वारा क्रस-बोर्डर व्यापार र व्यवसाय विस्तार सुविधा.
नाइजेरिया मा ट्रेडमार्क दाखिला प्रक्रिया
1. मुख्य / एजेन्ट को ट्रेडमार्क को एक आधिकारिक एजेन्ट मार्फत ट्रेडमार्क फाइल हुनेछ, पेटेंट र डिजाइन रजस्ट्री, व्यावसायिक व्यवस्था विभाग, उद्योग को संघीय मंत्रालय, नाइजेरिया मा व्यापार र लगानी.
2. रजिस्ट्री संग एक प्रारम्भिक खोज को चिन्ह को गैर-संघर्ष पुष्टि गर्न आवश्यक छ अवस्थित ट्रेडमार्क वा चिन्ह बाँकी दर्ता दर्ता गर्न खोजे. को प्रारम्भिक खोज दुई भित्र गरिनेछ (2) काम दिन.
3. जहाँ ट्रेडमार्क दर्ता लागि स्वीकार्य छ, पत्र / स्वीकृति को सूचना ट्रेडमार्क को रजस्ट्रार द्वारा जारी गरिनेछ.
4. ट्रेडमार्क को नाइजेरियाली ट्रेडमार्क जर्नल मा प्रकाशित गरिने छ र दुई अवधिका लागि विरोध खुला हुनेछ (2) विज्ञापन को मिति देखि महिना.
5. यदि ट्रेडमार्क को दर्ता गर्न कुनै आपत्ति निर्दिष्ट अवधि भित्र प्राप्त वा कुनै आपत्ति सम्हाल्नुभएको छन्, दर्ता को प्रमाणपत्र रजस्ट्रार द्वारा जारी गरिनेछ. दर्ता प्रमाणपत्र दर्ता को प्रारम्भिक दाखिला को मिति हुनेछ.
ट्रेडमार्क दर्ता गर्न सकिन्छ सीधै मा त (कालो र सेतो) रंग वा रंग ढाँचामा. तथापि, यो छ भने एक रंग ढाँचा, सुरक्षाको कि रंग सीमित गरिनेछ मात्र. यदि यो सीधै छ (कालो र सेतो), दर्ता ट्रेडमार्क को प्रस्तुति सबै रंग गर्न सुरक्षा उठयो पर्छ.
पहिलो-को फाइल नियम नाइजेरिया मा बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता लागि ठूलो महत्त्व छ. दुई वा बढी आवेदन समान वा यस्तै हो भने मात्र पहिलो आवेदन दर्ता लागि महत्व दिइनेछ.
एक व्यक्ति को नाम मा हामी ट्रेडमार्क बाहिर हडताली लागि ट्रेडमार्क न्यायाधिकरण गर्न आवेदन तपाईंलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ दर्ता, दृढ वा कम्पनी के तपाईं लामो चिन्ह संग व्यापार transacted र एउटै द्वारा दुनिया भर ज्ञात छ कि आधार मा दर्ता गर्न चाहनुहुन्छ ट्रेडमार्क नजिक छ.
नाइजेरिया मा ट्रेडमार्क दर्ता लागि अवधि तीन छ (3) औसत मा महिना.
नाइजेरियाली ट्रेडमार्क दर्ता सात को थालनी वैधता अवधि छ (7) वर्ष, र त्यसको, चौध लागि अनिश्चितकालीन अक्षय (14) वर्ष. नवीकरण लागि आवेदन तीन भन्दा पछि छैन गरिनु पर्छ (3) यस कारण मिति देखि महिना.
नाइजेरिया मा ट्रेडमार्क दर्ता लागि आवश्यकताहरू
एक चिन्ह लागि क्रममा (एक प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न भन्दा अन्य) को ट्रेडमार्क दर्ता को भाग एक मा registrable हुन, यसलाई समावेश वा निम्न आवश्यक ब्योरे कम्तिमा एक हुनुपर्छ:
1. एक कम्पनी को नाम, व्यक्तिगत, वा दृढ, एक विशेष वा विशेष प्रकारले प्रतिनिधित्व;
2. दर्ता लागि आवेदक को हस्ताक्षर वा आफ्नो व्यापार केही पूर्ववर्ती;
3. एक आविष्कार शब्द वा आविष्कार शब्दहरू;
4. एक शब्द वा शब्दहरू माल को वर्ण वा गुणस्तर कुनै प्रत्यक्ष सन्दर्भ भइरहेको, र यसको साधारण signification एउटा भौगोलिक नाम वा थर अनुसार छैन हुनुको;
5. अन्य कुनै पनि विशिष्ट चिन्ह:
नाम वा चिन्ह दर्ता गर्न एक दर्ता चिन्ह संग अद्वितीय र dissimilar हुनुपर्छ खोजे.
साधारण अंग्रेजी शब्दहरू हुन् कि शब्द चिह्न उपकरणहरू वा लोगो संग संयोजन मा दर्ता हुन सक्छ.
नाम वर्णनात्मक हुनु हुँदैन, र सार्वजनिक नीति वा अनैतिकताबारे हस्तक्षेप हुँदैन.
आवेदक / प्रमुख छ नाम सम्म प्रस्तावित सक्छ, मामला मा नाम को कुनै पनि अस्वीकार गर्दै.
आवेदक निम्न विवरण प्रदान गर्न हुनेछ: कम्पनी वा व्यक्तिगत पूरा नाम(को), राष्ट्रियता, भौतिक ठेगाना, राहदानी तस्वीर, र सामान को वर्ग दर्ता गर्न खोजे.
ट्रेडमार्क दर्ता गर्न JPEG ढाँचामा लोगो को रूप मा हुन सक्छ खोजे (अर्थात्. 120पिक्सेल एक्स 100px, 1200 डीपीआई).
ट्रेडमार्क दर्ता हुन सक्छ सादा कालो र सेतो वा रंग मा मा त
एक छुट्टै आवेदन ट्रेडमार्क दर्ता गरिने लागि सामान प्रत्येक वर्गीकरण लागि बनाइने हुनेछ. नाइजेरिया वर्तमान सामान को अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण निम्नानुसार. एक छुट्टै आवेदन ट्रेडमार्क दर्ता गर्न छ जसको लागि सामान प्रत्येक वर्गीकरण लागि दायर गरिएको छ.
ट्रेडमार्क दर्ता लागि तयारी
को लेक्स Artifex व्यवस्था कार्यालय नाइजेरिया मा ट्रेडमार्क दर्ता मा नाइजेरियाली र अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरु सहायता. The documents and details required above can be sent to the office via email at lexartifexllp@lexartifexllp.com निम्न साथ:
1. ढाकिएको वा प्रस्तावित सामान को एक पूर्ण दायरा ट्रेडमार्क द्वारा कवर गर्न.
2. लेक्स Artifex गर्न अधिवक्ता एक पावर, बस हस्ताक्षर, नाम को पूर्ण ब्योरे संग(को), ठेगाना(यो छ) र आवेदक को राष्ट्रियता(को). पुरा नाम(को) र हस्ताक्षरकर्ताको को क्षमता आवेदक दृढ / कम्पनी हो भने.
Please refer to this post on the नाइजेरिया मा ट्रेडमार्क दर्ता को लागत for the billing arrangement.
हाम्रो ट्रेडमार्क सेवाहरु शामिल:
"रेकर्ड मा अधिवक्ता" को रूपमा प्रतिनिधित्व
बौद्धिक सम्पत्ति कानून मा सल्लाहकार
सरकार कागजात र correspondences को सेवा को लागि स्थानीय ठेगाना को प्रावधान,
oppositions रक्षा (कुनै पनि यदि),
ट्रेडमार्क को नवीकरणहरूले कायम राख्ने.
लेक्स Artifex LLP ट्रेडमार्क को एक पूर्ण सीमा प्रदान गर्दछ, पेटेंट, र औद्योगिक डिजाइन आवेदन तयारी र अभियोजन सेवाहरू. हाम्रो टोली आईपी वकीलहरु comprises & बौद्धिक सम्पत्ति को व्यावसायीकरण र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार को प्रवर्तन विशेषज्ञ जो Solicitors.
एक व्यापार-केन्द्रित बौद्धिक संपदा सल्लाह लागि, आज हामीलाई सम्पर्क, मा इमेल lexartifexllp@lexartifexllp.com, कल +234.803.979.5959. हाम्रो टोली मद्दत गर्न तयार छ!
लेक्स Artifex LLP गरेको बौद्धिक सम्पत्ति अभ्यास समूह.